ChaCha + iPhone: သတိပေးချက်များ၊ ပထဝီဝင်၊ အဖြေများ၊ မျှဝေခြင်း။ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 25, 2011 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 29, 2011 Douglas Karr
ကျွန်တော် download ချပြီး ChaCha မွမ်းမံထားတဲ့ iPhone Application နဲ့ကစားရတယ်။ ငါအထင်ကြီးမိပါတယ် ... အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်ရိုးရှင်းပြီး features တွေကြံ့ခိုင်ဖြစ်ကြသည်။ မူလ ChaCha iPhone အက်ပလီကေးရှင်းသည်ဒေတာဘေ့စ်မှအဖြေများကို iPhone အက်ပ်မှတဆင့်အသုံးပြုသူထံသို့ပြန်ပို့ပေးခဲ့သည်။ ဒီလျှောက်လွှာဟာအတော်လေးအဆင့်မြင့်တက်ပြီးအံ့အားသင့်စရာအနည်းငယ်တွေ့ရသည်။
ယင်းနှင့်အတူအမျှ ChaCha အဖြေမရသေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုလမ်းညွှန်ရေကန်ထဲကို ၀ င်စေတယ် live response.
ChaCha သည်အမြဲတမ်းသိမ်းဆည်းထားသည် ၎င်း၏မေးခွန်းများကိုနှင့်အတူပထဝီ ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှအဲဒီအချက်အလက်တွေဘယ်တော့မှမ တစ်နေ့လျှင်သန်းပေါင်းများစွာတုံ့ပြန်မှုများကိုတွန်းအားပေးနေသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုသည်၎င်းသည်ရွှေတုံးများစွာ၏အချက်အလက်ဖြစ်သည်။ အက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ဗီဒီယိုတွင် Scott ဖော်ပြသည့်အတိုင်းအခြားသူများကသင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မည်သည့်မေးခွန်းများမေးနေသည်ကိုကြည့်ခြင်းကစွဲလမ်းစေသည်။
ယခုသင်နိုင် သတိပေးချက်များထည့်ပါ! စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာရှိသလား။ ရလဒ်များကိုသင့်ဆီသို့တွန်းပို့ပါ။ ငါ့သမီးရှိလိမ့်မယ်သေချာပါတယ် Justin Bieber ရဲ့မေးခွန်းများ အချိန်မရွေးသတ်မှတ်ထားသည်
မေးခွန်းတစ်ခုကိုမျှဝေခြင်း အီးမေးလ်၊ SMS၊
Scott အဖွဲ့သည်တီထွင်ဆန်းသစ်သောအတွေးအခေါ်အချို့နှင့်အတူ ဦး ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ထည့်သွင်းစဥ်းစားပါက Google Panda ဒီခြေလှမ်းက ChaCha ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုတိုးစေတယ်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်ကကြည့်လျှင်၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံး (the နှင့်အတူ) ပိုမိုကြည့်ရှုရန်အားပေးခြင်းကိုနှစ်သက်သည် ငါ့ကိုအနီးအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုသူများကို (နှင့်အတူ။ ) ပြန်လာရမယ့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအင်္ဂါရပ်များတွင်တည်ဆောက်အဖြစ် သတိပေးချက်များ).
ChaCha အသင်းကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင်၏ iPhone ပေါ်ရှိ ChaCha iPhone အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ကိုရှာ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ။ အိုင်ပက်ဒ်ဗားရှင်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါအရမ်းအေးလွန်းပါတယ်။